फारम भर्दा विभागको दररेटभन्दा बढी रकम नतिरौं | गृहपृष्ठ
Home रोजगारी फारम भर्दा विभागको दररेटभन्दा बढी रकम नतिरौं
on: ३० मंसिर २०६९, शनिबार ००:०० रोजगारी
फारम भर्दा विभागको दररेटभन्दा बढी रकम नतिरौं
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगार विभागमा भर्नुपर्ने आवेदन फारम र अन्य आवश्यक कागजातको फोटोकपी गर्नेजस्ता कामले हैरानी खेप्दै आएका छन् । कतिपय फोटोकपी पसलले बत्ती नभएको र जेनेरेटरबाट फोटोकपी गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिफोटोकपी ४० देखि ५० रुपैयाँसम्म लिने गरेको सम्बद्ध व्यक्तिहरूको भनाइ छ । त्यस्तै ठगीमा परेको कामदारको तमसुक, उजुरी लेख्दा कानून व्यवसायीले आफूखुशी शुल्क लिने गरेको विभागस्रोतले बताएको छ । व्यक्तिगत प्रयासबाट श्रम स्वीकृति लिन आएका कामदारले फोटोकपी, आवेदन फाराम, टिकटजस्ता कुराका लागि रू. १ हजार भन्दा बढी तिर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, त्यस्ता व्यवसायीबाट गैरकानूनी रूपमा हुने ठगी रोक्न फोटोकपी सेण्टर र कानून व्यवसायीका लागि छुट्टै आचारसंहिता बनाएको विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए ।
आचारसंहिताअनुसार कुनै पनि फोटोकपी पसलले आवेदनसहित सम्पूर्ण काम गरेको २ सय रुपैयाँसम्म मात्र लिन मिल्छ । यदि कुनै फोटोकपी पसलले २ सय रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएमा विभागमा उजुरीसमेत दिन सकिनेछ । कामदारले दिएको उजुरीको आधारमा कुनै फोटोकपी सेण्टरले बढी रकम लिएको प्रमाण फेला परेमा कारबाही गरिने विभागका एक अधिकारीले बताए । केही समययता विभाग आसपासमा रहेका दलालले कामदारको आवदेन फारम भरिदिने आशा देखाएर हजारौं रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन् । बढी रकम लिएर फारम भरिदिने आश देखाउने दलालको पछि नलाग्नसमेत विभागले अनुरोध गरेको छ । सामान्य अवस्थामा श्रम स्वीकृति लिन आवेदन फारम भर्दा ५० रुपैयाँ लाग्छ । कामदार तथा व्यवसायी दुवैलाई असर नपर्ने गरी रू. २ सयसम्म लिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको हो । तर, कामदार तथा व्यवसायीको सहमतिमा त्यसभन्दा कम रकममा पनि सो काम गर्न सकिने विभागले बताएको छ ।
त्यस्तै ठगीमा परेका कामदारको
तमसुक तथा उजुरी लेख्ने कानून व्यवसायीले बढीमा ३ सय रुपैयाँसम्म मात्र लिन पाउनेछन् । कानून व्यवसायीले निवेदन लेखेको दररेटको बारेमा लिखित जानकारी नदिए पनि आचारसंहिता जारी गरेपश्चात् ३ सय रुपैयाँ लिने सहमति गरेको विभागले बताएको छ । आचारसंहिता जारी हुनुअघि कानून व्यवसायीले एउटा तमसुक लेखेको व्यक्ति हेरेर ३÷४ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको कामदारहरूले बताएका छन् । तोकिएभन्दा बढी रकम लिएको थाहा भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गरिने भट्टराइको भनाइ छ । ‘हामीले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका ठगी रोक्न स्थानीय निकाय तथा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा ठूलो प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, कामदारहरू विभाग आसपासमै ठगिएको पायौं ।’ विभाग आसपासका फोटोकपी सेण्टर तथा कानून व्यवसायीबाट नठगिऊन भनेर केही हप्ताअघि मात्र यस्तो कदम चालेको उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृतिको फाराम भरिदिने भन्दै विभागमा सयौं दलाल बस्ने गरेका छन् । कतिपय दलालले प्रक्रिया नै नपु¥याई फारम भरेर कामदारको पैसा मात्र लिने गरेका छन् । त्यस्ता दलालबाट बच्न कामदारहरू सजग रहनुपर्छ । श्रम स्वीकृतिका लागि सकभर कामदार स्वयम्ले नै फारम भर्नुपर्छ । यदि आफुले भर्न नसकेमा विभागले तोकेको दरअनुसार २ सय रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्छ ।